Fikradaha asalka ah ee ku suntan calaamadaha kirismaska ​​| Abuurista khadka tooska ah
Judit Murcia | | Dhiirrigelinta, dhowr
Waa taariikho ku saabsan faahfaahintu waa mid aad u qiimo badan, dhamaanteenna waan ku faraxsanahay inaan helno iyo inaan hadiyado siino kuwa aan jecel nahay. Waxaa jira sawir aad u caadi ah ee Christmas, waana marka aad gasho qolka cuntada oo aad hesho hadiyado ka buuxaan. Carruurtu waxay rajaynayaan xilligan sanadka oo dhan. Wixii kala sooc hadiyaddiisu tahay mid kasta, ama si fudud loogu talagalay soo bandhig si aad u qurux badan ayaan kugula talineynaa inaad sii wadato akhriska.
Waa muhiim in la tixgeliyo dhammaan canaasiirta. Waxaan soo jeedineynaa qaar fikrado hal abuur leh si aad u habeysid kanaga calaamadaha. Waxaa jira noocyo badan, waxaanan kuu xaqiijinaynaa inay ku siin doonto a taabasho aad u gaar ah.
1 Sumado shaqsiyeed oo wata qoraallo dheg dheg ah
2 Sumadaha leh sawirro
3 Calaamadaha kartoonka oo kuul ku leh
4 Calaamadaha kartoonka oo leh haraaga dharka
5 Kubadaha hufan
6 Magacyada lagu qoray farsamada xarafka
7 Soodejiso summadaha Kirismaska
8 Shaabaddo leh xarfo
9 Maqaarka dharka alwaaxa
Sumado shaqsiyeed oo wata qoraallo dheg dheg ah
Kahor intaadan bilaabin sameynta sumadaha waa inaad ka fikirtaa cidda lala hadlayo oo la jaan qaado naqshadahaaga xaalad kasta. Tusaale ahaan, haddii ay tahay inaad qolka cuntada ka buuxiso hadiyado loogu talagalay carruurta kala duwan, waad awoodi kartaa isticmaal midabyo si loo aqoonsado hadiyad kasta. Waxaan sidoo kale heli doonaa a saameyn muuqaal ah aad u qurux badan Qiyaas qolka cuntada oo ay ka buuxaan hadiyado midabbo kala duwan leh: buluug, casaan, cagaar, casaan, oranji. Midab kastaa wuxuu yeelan karaa qof kale. Si loo gaaro saameyntaan waan dhajin karnaa midab qoraalo dheg dheg leh. Way jaban yihiin oo way fududaan karaan koollada.
Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa xaqiiqda ah inay yihiin kuwo shaqsiyeed si aad ula qabsatid mid kasta oo ka mid ah dadka aad siiso. Waxaad haysataa fursado badan, annaguna xul ayaan sameynay in laguu waxyoodo ama kuu soo saaro qaar ka mid ah fikradaha aan ku tusno.
Sumadaha leh sawirro
Beddelka wanaagsan, oo aan had iyo jeer tixgelin siin, waa abuurista sumadaha iyadoo la adeegsanayo sawirro. Waxaan had iyo jeer ku dhacnaa mawduuca ah inaan qorno magaca qofka qaata, laakiin sida ay yiraahdaan "Sawirku wuxuu u qalmaa kun eray". Intaas waxaa sii dheer, waa sumad loo hayn karo hadiyad kale. Waxaad ku dhejisan kartaa sawirka, ama waxaad ku duubi kartaa xarig hadiyadda oo waxaad ku laadin kartaa weel dhar ah.
Waxay noqon kartaa madadaalo raadi sawiro hore, qosol leh ama aad na xasuusiso a waqti fiican agtiisa ama iyadu.
Calaamadaha kartoonka oo kuul ku leh
In kastoo a sumadda kartoonka wax ku ool ah, waxaan siin karnaa taabasho aad u qabow haddii aan isticmaalno waxyaabo kala duwan kuul in dib loo abuuro jilayaasha Kirismaska.
Haddii aad fiiriso sawirka, waxaa jira fursado badan iyo qaabab lagu abuuri karo saameyntan. Tusaale ahaan, a Nin baraf wata waxaa lagu gaari karaa dhajinta saddex badhan oo cad. Haddii aan eegno godadka ku yaal badhanka laftiisa, midka hoose, oo ah kan ugu weyn, wuxuu leeyahay afar dalool inta soo hartayna laba kaliya. Kuwii dhexda ayaa na xusuusinaya badhannada funaanad, iyo kuwa ka sarreeya indhaha. Calaamadeeyaha waxaan ku siinaynaa taabashada ugu dambeysa. Xusuusnow, waa muhiim in marka hore sawiro canaasiirta iyo hadhow dheji badhanka. Hab kale oo sahlan oo lagu helo a Nin baraf wata Waxay ka timid kubbado cudbi ah.
Calaamadaha kartoonka oo leh haraaga dharka
U guurista walxo qaro weyn, waxaan dooran karnaa kan warqad warqad ah. Wax badan ayaan heli doonaa adkeysiga y iska caabin. Tallaabada ugu horreysa waa in lagu gooyo kartoonada qaabka aan aadka u dooneyno. Kuwa ugu badan ee la isticmaalo ayaa ah qaabab afar gees ah. Marka la gooyo, waxaan isticmaali doonaa dharka leh qaababka kirismaska inaad iyaga taabasho gaar ah siiso. Waan ka heli karnaa mid kasta dukaanka tolida.
para Dharka ku dheji kartoonka, ikhtiyaarka ugu fiican waa in la isticmaalo Xabagta cad o xabagta taabashada. Waxaan kaaga tagi doonaa fikrado qaar si aan kuu dhiirigaliyo.
Kuwani waxay ku jireen moodada muddo dheer Kubadaha Kirismaska totalmente hufan. Halkii aan ka soo laalaadin lahayn geedka ama albaabka albaabka, waan u isticmaali karnaa sumad hadiyadeena. Waan awoodnaa buuxi gudaha con waraaqaha qoraalada la socota nombre ee qofka
Magacyada lagu qoray farsamada xarafka
Farsamada xaraf Waxay ka kooban tahay ka gudubid naqshadeynta qoraalka, waa isku darka u dhexeeya qorista iyo sawiridda, qurxinta ama sameynta qaabab xarfaha leh. Sidaa darteed, waxaa la dhihi karaa waa kan farshaxan sawir leh xaraf.
Se wax ka beddelo xarfaha waxayna u qaabeysan yihiin si habboon si ay uga sii qurux badnaato. Waxaa lagu samayn karaa qalab kasta oo qoraal ah. Tusaale ahaan, burushyo, calaamado (oo dhumuc ahaan ka duwan), qalimaan, iyo kuwo kale. Waxaan kuu dhaafnay xiriiriye a link aad u xiiso badan oo ina baraysa inaanu qabanno xaraf salka
Soodejiso summadaha Kirismaska
Waqti la'aan Maaha inay micnaheedu tahay inaan ku qasban nahay iska casilaan soo bandhigid wanaagsan. Xalka aan idiin soo bandhigeyno ayaa ah soo qaado sumadaha ciidaha sidaa darteed waa inaad iyaga kaliya daabacdaa. Intooda badani waxay leeyihiin boos ay ku qoraan magaca. Waxaan ku tusaynaa qaar links halkaa download Sumadahaani midabka u yeelan doona hadiyadahaada ayaa gebi ahaanba bilaash ah.
Shaabaddo leh xarfo
Ikhtiyaar kale oo noo oggolaan doona badbaadiyo waqti badan waa in la isticmaalo shaambadaha warqadda. Waxaan iibsan karnaa a xirmada Iyada oo dhan alifbeetada khadna tag oo calaamadi xarfaha illaa magaca la doonayo la sameeyo.
Doorashadan sidoo kale waa lagu talin karo kuwa far fiican kuma lahan mana rabaan inay ka tanaasulaan sameynta calaamadda farshaxanka. Ha isku dayin inaad daabacdo bog magaca ku qoran kumbuyuutar.
Maqaarka dharka alwaaxa
Fikradani runtii waa mid asal ah waxayna siisaa taabasho aad u qabow hadiyadeena. Fikradda ayaa ah ku qor dusha marada dharka magaca qofka hadiyada loo soo diray. Si loo qurxiyo isku xirnaanta waxaan adeegsan karnaa ilo fara badan.
Waan awoodnaa qabashor wax kasta shay, maskaxda ku hay in haddii ay tahay plano way fududaan doontaa in si sax ah loo xajiyo. Waxaan tixraaceynaa jilayaasha Kirismaska ​​ama xiriirada. Waxaan kuu daynay a set of images si aad si fudud ugu fahamtid fikradda oo aan tixraacno.
Hadaad rabto inaad ka faaiidaysato rinji ciddiyaha duugga ah inaad guriga ku haysato, waa hab fudud oo loo maro rinji khaliifka oo midabbo kala duwan leh. The Natiijadu way fiican tahay oo guriga kuma nijaasayso. Haddii aad isticmaasho buufin, waa inaad aad uga taxaddartaa inaadan wax wasakheyn, maaddaama rinjiga uu ku faafayo meel kasta, marka lagu daro urta adag ee ay gadaal ka reebayso.
Sidoo kale, haddii aynaan haysan waqti badan ama xirfad, waan awoodnaa ku soo iibso dharka dharka lagu xidho astaamaha kirismaska oo waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan ku qorno magaca calaamadeeye. Tan dhexdeeda link waxaad ka heli doontaa dukaamada internetka meesha soo iibso dharka kirismaska qiimo jaban.
El Feliz Navidad!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Fikradaha asalka ah ee calaamadeynta hadiyadaha kirismaska